DFKMS oo wakhtigii kaga dhamaaday maamul soo jireen ahaa oo xor ah, halkii ay Soomaaliya gacanta ku dhigi lahaayeen.
Ka dib hadalk ka soo yeeray Agaasimaha Guud ee Wasaarada Kalluumaysiga iyo Khayraadka Badda ee DFKMS oo uu ku sheegay in aysan DGPL la geli karin heshiis wadanka Yemen amaba cid kale iyadoo aysan waxba kala socon Dowladda Dhexe ee Soomaaliya, ayaa arintaas waxaa si weyn uga carooday masuuliyiin ka tirsan maamulka iyo waliba shacabka Puntland oo ku sheegay xoriyad ka qaad.
Dhinaca Maamulka masuuliyiin ka tirsan Golaha Xukuumada ayaa u sheegay Saxaafada in ay tahay arintaas wax laga xumaado , ayna Puntland xaq u leedahay in ay heshiis, la geli karto cidday rabto, balse Dowladda Federaalka Soomaaliya, aysan u xanibayn heshiisyada ay gelayso, masuuliyiintaan oo aad ay caro uga muuqatay ayaa hadalka ka soo yeeray masuulka DFKMS ku tilmaamay mid aan laga fiirsan oo layska yiri.
Sida lala socdo, Puntland waxay qayb ka tahay habka Federaaliga ah., ee ay ku dhisan tahay DFKMS waana maamulka Goboleedka kaliya ee oo si buuxda ula shaqeeya DFKMS dhinac kasta, balse waxaa beryahaan danbe soo baxaya saluugsanaanta ay saluugsan yihiin Reer Puntland qaabka ay u dhaqmayaan qaar ka mid ah, masuuliyiinta DFKMS.
Puntland waxay leedahay Golayaasha sida Golaha Xukuumada, Golaha Wakiilada iyo waliba Garsoorka waana maamul dhisan oo dhamaystiran.DFKMS oo isticmaalaysa axdiga ku meelgaarka ah oo wali qabyo ah ayaan wali si buuxda loo waafajin kan DGPL ee Soomaaliya.
Hadda ka hor ayeey ahayd markii uu soo kala dhexgalay muran maamulka Puntland iyo Reysul-wasaaraha DFKMS, Cali Maxamed Geedi kaas oo ku wajahnaa macdanta iyo shidaalka Puntland oo uu amray Rey-sul wasaaruhu in aysan Puntland siday doonto ula geli karin heshiis shirkadaha ajninbiga iyadooo aysan soo marin DFKMS, walow arintaas xal laga gaaray ka dib markii ay masuuliyiinta ugu sareeya DFKMS iyo kuwa DGPL ka wada hadleen.
Dhinaca Shacabka Puntland. Shacabka ayaa waxay is-weydiinayaan waxa keenay in 'Agaasime uu amar siiyo madaxda DGPL oo xor u ah maamulkooda.
DFKMS maxay ugu laalaabanaysaa Puntland ma geel baa ugu dhalay, waxaa laga rabaa wixii lagu soo heshiiyey ee ahaa in ay soo dhisto Maamul Goboleedyadii kale sida uu dhigayo Nidaamka federaaliga ah waxaa sidaas qaba shacabka Puntland.
Waxaa nasiib daro ah , in ninkasta oo xil ka haya DFKMS uu afarta jeeb ku buuxsado xaqii shacabka masaakiinta ah ee Puntland oo gaajo iyo cuduro u dhimanaya, aysana ku baaqan canshuurta aysan awoodin oo dusha looga tuuray sidii loogu biili lahaa madaxda DFKSM oo aan maanta wax kale gacanta ku hayn marka laga reebo DGPLS oo ah maamul nidaam leh oo dhisan.
Faafin: SomaliTalk.com | July 7, 2007